Inqubomgomo Yemfihlo - Gamepron
Igcine ukubuyekezwa: Jan 05, 2021 Gamepron. ("Thina", "thina", noma "wethu") isebenza iwebhusayithi ye-Gamepron (i- "Service").
Leli khasi likukwazisa ngezinqubomgomo zethu ngokuphathelene nokuqoqwa, ukusetshenziswa nokudalulwa kolwazi lomuntu siqu uma usebenzisa isevisi yethu.
Ngeke sisebenzise noma sabelane ngolwazi lwakho nanoma ubani ngaphandle kokuthi kuchaziwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Sisebenzisa imininingwane yakho ukuhlinzeka nokwenza ngcono isevisi. Ngokusebenzisa i-Service, uyavuma ukuqoqwa nokusetshenziswa kolwazi ngokuya ngale nqubomgomo. Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela kule Nqubomgomo Yobumfihlo, imigomo esetshenziswe kule Nqubomgomo Yobumfihlo inezincazelo ezifanayo neMigomo Nemibandela yethu, efinyeleleka ku-https: //gamepron.com
Ngenkathi sisebenzisa Isevisi yethu, singakucela ukuthi usinikeze imininingwane ethile engakhonjwa yomuntu uqobo engasetshenziselwa ukuxhumana nawe noma ukukukhomba. Imininingwane ekhomba umuntu uqobo ("Ulwazi Lomuntu Siqu") ingafaka, kepha ayikhawulelwe ku:
Siqoqa imininingwane esithunyelwa isiphequluli sakho noma nini lapho uvakashela i-Service yethu (“Log Data”). Le Log Data ingafaka imininingwane efana nekheli lekhompyutha yakho le-Internet Protocol (“IP”), uhlobo lwesiphequluli, inguqulo yesiphequluli, amakhasi oMnyango wethu owavakashelayo, isikhathi nosuku lokuvakasha kwakho, isikhathi osichithe kulawo makhasi nokunye izibalo.
Amakhukhi amafayela anenani elincane ledatha, elingafaka isikhombi esihlukile esingaziwa. Amakhukhi athunyelwa kusiphequluli sakho evela kuwebhusayithi futhi agcinwe kwi-hard drive yekhompyutha yakho.
Sisebenzisa "amakhukhi" ukuqoqa imininingwane. Ungayala isiphequluli sakho ukuba senqabe wonke amakhukhi noma sikhombise lapho kuthunyelwa ikhukhi. Kodwa-ke, uma ungawemukeli amakhukhi, ngeke ukwazi ukusebenzisa ezinye izingxenye zensizakalo yethu.
Singasebenzisa izinkampani zangaphandle kanye nabantu ngabanye ukusiza isevisi yethu, ukuhlinzeka ngeNsizakalo, ukwenza amasevisi ahlobene nesevisi noma ukusisiza ekuhlaziyeni ukuthi isevisi yethu isetshenziswa kanjani.
Lawa maqembu wesithathu afinyelela ulwazi lwakho lomuntu siqu kuphela ukwenza le misebenzi egameni lethu futhi anesibopho sokungawudalule noma awisebenzise nganoma iyiphi enye injongo.
Ukulondeka kolwazi lwakho lomuntu kubalulekile kithi, kodwa khumbula ukuthi ayikho indlela yokudlulisela phezu kwe-inthanethi, noma indlela yokugcina i-electronic i-100% ivikelekile. Njengoba silwela ukusebenzisa izindlela ezamukelekayo ezentengiselwano ukuvikela ulwazi lwakho lomuntu siqu, asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha okuphelele.
Asinakho ukulawula, futhi asithathi umthwalo wokuqukethwe, izinqubomgomo zobumfihlo noma imikhuba yamasayithi noma amasevisi wesithathu.
Isevisi yethu ayibhekise kunoma ubani ongaphansi kweminyaka engu-18 ("Izingane").
Asazi ngokuqoqa ukwaziswa komuntu siqu okubonakalayo kusuka ezingaphansi kwe-18. Uma ungumzali noma umlondolozi futhi uyazi ukuthi ingane yakho isinikeze ngolwazi lomuntu siqu, sicela uxhumane nathi. Uma sithola ukuthi ingane ngaphansi kwe-18 isinikeze Ulwazi Lwakho, sizosusa ulwazi olunjalo kumaseva ethu ngokushesha.
Sizokudalula Ulwazi Lwakho Lomuntu siqu lapho kudingeka khona ukwenza umthetho ngomthetho.
Singase sibuyekeze Inqubomgomo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile. Sizokukwazisa nganoma yiziphi izinguquko ngokuthumela Inqubomgomo Yobumfihlo entsha kuleli khasi.
Ukwaziswa ukuthi ubuyekeze le Nqubomgomo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile nganoma yiziphi izinguquko. Izinguquko kule Nqubomgomo Yobumfihlo ziyasebenza uma zithunyelwe kuleli khasi.